बंशलाल तामाङलाई प्रेमध्वजको साथ, जित निश्चित | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७८ फागुन २९, आईतबार (२ महिना अघि) २५ पटक पढिएको
२९ फागुन, चौतारा ।
नेपाली काँग्रेस सिन्धुपाल्चोकको आसन्न १४ औं जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदमा बंशलाल तामाङलाई डा. प्रेमध्वज लामाले साथ दिने भएका हुन् । सभापति पदमा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा दोस्रो भएका तामाङलाई तेस्रो भएका डा. लामाले साथ दिने भएपछि तामाङको जित निश्चित जस्तै भएको हो ।
काँग्रेस जिल्ला सभापति पदका लागि शनिबार त्रिपक्षीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा मोहन बस्नेत समुहका उम्मेद्वार जंगबहादुर लामाले ७ सय ५ मत, विकास लामा समुहका उम्मेद्वार बंशलाल तामाङले ६ सय २९ मत र समुह विहीन उम्मेद्वार डा. प्रेमध्वज लामाले ४ सय ९५ मत प्राप्त गरे । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार प्रमुख पदमा निर्वाचित हुन कम्तिमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने भएकोले जंगबहादुर र बंशलालविच पुनः निर्वाचन हुनेछ । तेस्रो भएका प्रेमध्वजले व्यक्तिगत प्रवृत्तिका विरुद्ध एकताको लागि बंशलाललाई समर्थन गर्ने भएका हुन् ।
डा. लामाले बंशलालाई समर्थन गरेको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता राजेन्द्रमान ताल्चाभडेंल, विष्णु खत्री लगाएतका नेताले काँग्रेसका मोहन बस्नेतको व्यक्तिबादी प्रवृत्ति हावी बन्दै गएकोले यसलाई चिनुपर्ने बताए । निवर्तमान कांग्रेस जिल्ला सभापति विकास लामा सहित अधिकाँश नेता कार्यकार्ताको साथ बंशलाललाई देखिएको छ ।
आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार बनाउनका लागि बस्नेतले १७ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रुपमा रहेका प्रेमध्वजलाई जागिरबाट राजिनामा गराएका थिए । निर्वाचनको सम्मुखमा उनलाई धोका दिदैँ बस्नेतले जंगबहादुर लामालाई आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार बनाएका थिए । आफूलाई धोका दिएपछि प्रेमध्वजले बस्नेतलाई बौद्धिकता नपचेको आरोप लगाएका छन् । ‘यतिबेला हामी नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकलाई एकीकृत, वैचारिक र सुदृढ बनाउने चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं ।’ बस्नेतको व्यक्तिवादी चरित्रको विरोध गर्दै डा. लामाले भने —‘पार्टी भित्रको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सामूहिक नेतृत्व विकास गर्न एकतावद्ध भएर लाग्न सबै प्रतिनिधि साथीहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
डा. लामाले साथ दिएपछि काँग्रेस जिल्ला सभापति पदमा बंशलालको जित निश्चीत जस्तै भएको छ । झिनो मतान्तरले दोस्रो भएका तामाङलाई डा. लामाको साथ पाएपछि जंगबहादुरलाई पछाडि पार्दै जित निकाल्न बाटो खुल्ला भएको छ । बंशलाल २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको दबदबाका बिच इन्द्रावती गाउँपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए । उनी अब जिल्ला सभापति पदमा पनि जित्ने सम्भावना उच्च बनेको छ ।